ဂွီဒို မိုနာကို - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂွီဒို မိုနာကို သို့မဟုတ် အရက်ဇိုမြို့မှ ဂွီဒို (အင်္ဂလိပ်: Guido of Arezzo၊ အီတလီ: Guido Monaco၊ အခြားအမည်များ: Guido Aretinus၊ Guido Aretino၊ Guido da Arezzo၊ Guido d'Arezzo၊ Guido Monaco Pomposiano၊ Guy of Arezzo သို့မဟုတ် Guy d'Arezzo) သည် အီတာလျံလူမျိုး အလယ်ခေတ်ကာလ ဂီတသီအိုရီပညာရှင်နှင့် ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်တွင် အသုံးပြုသော စတက်ဖ်စသော ဂီတ‌သင်္ကေတတို့ကို တီထွင်သူဟူ၍လည်း ယူဆကြသည်။ သူ၏ မိုက်ခရိုလိုးဂပ်စ် (Micrologus) အမည်ရှိသော ဂီတကျမ်းစာသည် အလယ်ခေတ်အတွင်း ဒုတိယအများဆုံး ဖြန့်ချိခြင်းခံရသည့်စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ခရစ်နှစ် ၁၀၂၅ သို့မဟုတ် ၁၀၂၆ တွင်ရေးသားသော ဂွီဒို၏ မိုက်ခရိုလိုးဂပ်စ်ကျမ်းစာတွင် ထိုကျမ်းကိုရေးနေစဉ် သူ၏အသက်သည် ၃၄ နှစ် ရှိသည်ဟု ရေးသားထားသည့်အတွက် သူ၏မွေးသက္ကရာဇ်မှာ ၉၉၁ သို့မဟုတ် ၉၉၂ ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။
ဂွီဒို မိုနာကိုသည်ဦးစွာ ဖရဲရားမြို့အနီး၌ရှိသော ပွန်ပိုစာ (Pomposa)‌ ကျောင်းတော်၌ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ၌သူသည် ‌အဆိုတော်များ ဂရီဂေါရီးယန်းချန့် (Gregorian Chant) ကိုမှတ်သားရာ၌ အခက်တွေ့နေသည်ကို သတိထားမိခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်သူသည် ဂရီဂေါရီးယန်းချန့်ကို အချိန်တိုတိုအတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်သားနိုင့်မည့် နည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့၍ ကျောင်းသားများကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့သင်ကြားမှုကြောင့် သူသည်အီတလီမြောက်ပိုင်းတွင် နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ ၁၀၂၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် သူ၏သင်ကြားမှုနည်းလမ်းကို အချို့သောဘုန်းကြီးများက မနှစ်သက်ကြသဖြင့် သူအား အရယ်ဇိုသို့ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်။
အရယ်ဇိုမြို့သို့ရောက်သောအခါ သူသည် စတက်ဖ်သင်္ကေတကို တီထွင်ခဲ့‌လေသည်။ ထို့အပြင် ဆိုးဖက်ဂျ် (Solfége) ခေါ် "ဒို-ရေ-မီ" အခေါ်ဝေါ်ကိုလည်းတီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုအခေါ်အဝေါ်၏မူလအစဉ်မှာ "အု(တ်)-ရေ-မီ-ဖာ-ဆို-လာ" (Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La) ဟူ၍ဖြစ်ရာ "Ut queant laxis" အမည်ရှိသောသီချင်း၏ စာသားမှ အသံထွက်များကိုယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခုနှစ်ခုမြောက်နုတ်ဖြစ်သော "စီ" (Si) ကို နောက်ပိုင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး "Sanctus Iohannes" မှ အစအက္ခရာများကို ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဂီတဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သော ဂျိုဗာနီ ဘာတီစတာ ဒိုနီ (Giovanni Battista Doni) သည် "အု(တ်)" မှ "ဒို" (Do) ဟု ပြောင်းလဲ‌ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဂီတဆရာမဖြစ်သော ဆာရာ ဂလိုဗာ (Sarah Golver) သည် "စီ" မှ "တီ" (Ti) သို့‌ပြောင်းလဲခဲ့ရာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကြသောလူတို့သည် "စီ" အစား "တီ" ဟုသီဆိုကြလေသည်။
၁၀၂၈ ခုနှစ်တွင် ပုပ်ရဟန်းကြီး ဂျွန် (Pope John XIX) သည် ဂွီဒို၏သင်ကြားမှုနည်းလမ်းတို့ကို ကြားသိခဲ့ရာ သူအား ရောမမြိုသို့လာရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဂွီဒိုသည် ရောမမြို့သို သွားခဲ့သော်လည်း ကျန်မာရေးဆိုးရွားလာမှုကြောင့် အရယ်ဇိုမြို့သို့ ပြန်လာခဲ့ရပေသည်။ ဤကာလမှနောက်ပိုင်း သူ၏ဘဝအကြောင်းကိုဆက်လက်မသိရှိရပေ။
ဂွီဒို၏အိမ်နှင့် "ဒို-ရေ-မီ-ဖာ-ဆို-လာ" ဟူသောပလက်ပြားတစ်ချပ်
↑ Stuart Lyons, Horace's Odes and the Mystery of Do-Re-Mi with Full Verse Translation of the Odes. Oxford: Aris & Phillips, 2007. ISBN 978-0-85668-790-7.
Music sheets of Guido of Azzero at IMSLP
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂွီဒို_မိုနာကို&oldid=677126" မှ ရယူရန်
၁၁ ရာစု ဂီတပညာရှင်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။